आईडाहो WIC | JPMA, Inc.
WIC को बारेमा
WIC के हो?
तपाईंको फाइदाहरू प्रयोग गर्दै
किनमेल गर्नु अघि तपाईंको खाता ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्
WICShopper मा तपाइँको कार्ड दर्ता गर्नुहोस् र "ट्याप गर्नुहोस्मेरो फाइदाहरू"।
टोल फ्री ग्राहक सेवा लाइन कल गर्नुहोस् (1-844-892-3084).
आफ्नो ब्यालेन्स जाँच गर्नको लागि आफ्नो कार्ड स्लाइड गर्न क्यासियरलाई सोध्नुहोस्।
तपाईंको बाँकी रहेको ब्यालेन्सको लागि तपाईंको अन्तिम रसिदको तल जाँच गर्नुहोस्।
खातामा लगईन गर्नुहोस् ebtEDGE.com वा ebtEDGE अनुप्रयोगमा।
तपाइँको स्थानीय WIC क्लिनिक लाई तपाइँको लाभ शेष रकम प्रिन्ट गर्न सोध्नुहोस्।
* यदि तपाइँसँग तपाइँको WIC बेनिफिटहरूको बारेमा प्रश्नहरू छन् वा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने, तपाइँको स्थानीय WIC क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोस्। क्लिनिक सम्पर्क जानकारी WICShopper मा पाउन सकिन्छ, ट्याप "WIC कार्यालय खोज्नुहोस्"।
ट्याप गर्नुहोस्WIC पसलहरू"WICShopper मा तपाइँको नजिक भण्डारहरू फेला पार्न।
स्टोर प्रविष्टिहरूमा "WIC यहाँ स्वीकार्य" साइन इन गर्नुहोस्।
तपाईंको WIC फूडहरूको लागि किनमेल गर्नुहोस्
तपाईंलाई चाहिने चीजहरू खरीद गर्नुहोस्। तपाईंले एक पटकमा सबै खाद्य पदार्थ किन्नु पर्दैन।
तपाइँका उपलब्ध सुविधाहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
के तपाईंसँग ननफाट वा १% दूध, २% दूध, or सम्पूर्ण दुध?
के तपाईंसँग कम फ्याट / ननफ्याट दहीका लागि लाभहरू छन्? or सम्पूर्ण दूध दही?
तपाईं कुनै ताजा फल र तरकारीहरू (जैविक सहित!) खरीद गर्न सक्नुहुनेछ जबसम्म त्यहाँ ड्रेसिंग, डुबकी, पागल, आदि जस्ता कुनै थप सामग्रीहरू छैनन्।
फल र तरकारीहरूमा लागू मात्र: यदि वस्तुले आईडाहो डब्ल्यूआईसी फूड सूचीमा फल र तरकारी आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ भने, यसलाई रेजिस्टरमा तिर्नु पर्छ। यो सत्य हो यदि फल वा तरकारीले WICShopper प्रयोग गर्ने बखत "WIC वस्तु होईन" को रूपमा स्क्यान गर्दछ।बारकोड स्क्यान गर्नुहोस्"वा"कुञ्जी UPC प्रविष्ट गर्नुहोस्" विशेषताहरु।
स्व-चेकआउट प्रयोग गर्दै? यदि लूज उत्पादनमा 4-5 अंकको नम्बर र मिनी-बारकोड भएको सानो स्टिकर छ भने, 4-5 अंकको नम्बरद्वारा वस्तु हेर्न स्व-चेकआउट स्क्रिन प्रयोग गर्नुहोस्। यसरी WIC ले उत्पादन वस्तुको लागि भुक्तानी गर्नुपर्छ।
सधैं आफ्नो WIC कार्ड मार्फत भुक्तान गर्नुहोस्, त्यसपछि SNAP, त्यसपछि अन्य प्रकारका भुक्तानीहरू (नगद, क्रेडिट, डेबिट)।
खरीद स्वीकृत गर्नु अघि, तपाईंको मध्य-खरीद रसिद जाँच गर्नुहोस् कि WIC ले तपाईंको सबै WIC वस्तुहरूको लागि भुक्तानी गरिरहेको छ।
यदि गैर- WIC आईटमहरूको लागि कूपन प्रयोग गर्दैछ भने, यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाईं आफ्नो WIC र गैर- WIC आईटमहरू दुई लेनदेनमा अलग गर्नुहोस्। तपाइँको कुपन गैर- WIC लेनदेन संग प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तपाइँ पूर्ण छुट पाउनुहुनेछ।
तपाईंको रसिद राख्नुहोस्। यदि तपाईंलाई स्टोरमा समस्या छ भने, यसले WIC लाई समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।
इडाहो WIC कार्डहरू अन्य राज्यहरूमा प्रयोग गर्न सकिँदैन।
लाभ महिनाको अन्तिम रात १२:०० बजे समाप्त हुन्छ।
प्रयोग नगरिएका लाभहरू अर्को महिनामा रोल हुँदैन।
तपाईंको कार्डको लागि हेरचाह गर्दै
तपाईंको कार्ड पुन: प्रयोग योग्य छ। तपाइँको सबै सुविधाहरू प्रयोग भैसकेको भए पनि तपाइँको कार्ड फ्याक नगर्नुहोस्।
घुमाउनुहोस्, प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशमा राख्नुहोस्, वा नजिक मैग्नेट / इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू।
तपाइँको कार्डमा तपाइँको पिन नलेख्नुहोस्।
* यदि तपाईंको कार्ड छ भने हराएको, चोरी भएको वा बिग्रिएको तुरुन्तै टोल-फ्री ग्राहक सेवा लाइनमा कल गर्नुहोस् (1-877-892-3084) यसलाई निष्क्रिय गर्न। प्रतिस्थापन कार्ड तपाईंलाई 5-7 व्यापार दिन भित्र मेल गर्न सकिन्छ। यदि यो महिनाको अन्तिम 10 दिन भित्रको हो र तपाईले मेल गरिएको प्रतिस्थापन कार्डको लागि पर्खन सक्नुहुन्न भने, तपाईले नयाँ कार्ड प्राप्त गर्न आफ्नो स्थानीय WIC क्लिनिकमा जान सक्नुहुन्छ।
तपाईंको पिनको बारेमा
PIN सेट नभएसम्म तपाईंको WIC कार्डले काम गर्ने छैन।
पिन सेट गर्न वा परिवर्तन गर्न कार्डधारकको जन्म मिति र मेलिंग पिप कोड चाहिन्छ।
तपाइँको पिन सेट गर्न वा परिवर्तन गर्न:
फोन: टोल-फ्री ग्राहक सेवा लाइनमा कल गर्नुहोस् (1-877-892-3084) र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
अनलाइन: प्रयोग गर्दै ebtEdge.com वा ebtEDGE अनुप्रयोग
EbtEDGE खातामा सिर्जना गर्नुहोस् वा लगइन गर्नुहोस्
तपाईंको WIC खाता चयन गर्नुहोस्
"पिन चयन" क्लिक गर्नुहोस्
तपाईंसँग चार पनी अवसरहरू छन् तपाईको पिन सही तरीकाले नगद दर्तामा प्रविष्ट गर्न। चौथो गलत प्रयास पछि, तपाइँको कार्ड लक हुनेछ।
तपाईं तुरुन्तै तपाईंको पिन परिवर्तन गरेर तपाईंको कार्ड अनलक गर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा, तपाईंको कार्ड अर्को दिन १२:१० बिहान स्वचालित रूपमा अनलक हुनेछ।
तपाईको पिन सेयर नगर्नुहोस्। यदि कसैलाई तपाइँको पिन थाहा छ भने, तिनीहरूले तपाइँका सुविधाहरू प्राप्त गर्न तपाइँको कार्ड प्रयोग गर्न सक्दछन् र ती सुविधाहरू प्रतिस्थापन हुँदैनन्।
एउटा परिवारसँग कति वटा WIC कार्डहरू हुन सक्छन्?
प्रत्येक परिवारसँग दुईवटा कार्डहरू हुन सक्छ।
फोस्टर अभिभावकको प्रत्येक फोस्टर बच्चाको लागी छुट्टै कार्ड हुन्छ।
के हो भने म मेरो ठेगाना सार्न वा परिवर्तन गर्न योजना गर्दछु?
तपाईंले आफ्नो WIC क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। सधैँ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि WIC सँग तपाईंको हालको मेलिङ ठेगाना र जिप कोड छ किनकि यहाँ मेल गरिएको प्रतिस्थापन कार्डहरू पठाइनेछ।
यदि मलाई मेरो WIC खाद्य सुविधाहरू बदल्न आवश्यक छ भने मैले के गर्नुपर्छ?
तपाईंको खाद्य लाभहरूमा कुनै पनि सम्भावित परिवर्तनहरू छलफल गर्न आफ्नो WIC क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
के मेरा लाभहरू अर्को महिनामा रोल हुन्छन् यदि तिनीहरू प्रयोग गरिएन भने?
होईन, खरीद गरिएको कुनै पनि WIC खाद्य सुविधाहरू महिनाको अन्तिम दिन मध्यरातमा समाप्त हुनेछन्।
यदि मैले WIC-अनुमोदित भएको जस्तो लाग्ने उत्पादन किन्न सक्दिन भने मैले के गर्नुपर्छ?
आईडाहो डब्ल्यूआईसी फूड लिस्ट जाँच गर्नुहोस् निश्चित गर्नुहोस् कि उत्पादले आवाश्यकताहरू पूरा गर्दछ
तपाईंको फाइदाहरूमा त्यो वस्तु उपलब्ध छ भनी सुनिश्चित गर्न आफ्नो लाभ ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्
ट्याप गर्नुहोस्म यो किन्न सक्दिन! ” WICShopper मा र फाराम पूरा गर्नुहोस्
यदि मेरो कार्डबाट लाभहरू लिइयो र मैले पसलबाट खाद्य वस्तुहरू प्राप्त गरेन भने मैले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंलाई स्टोरले त्रुटिपूर्ण बनाएको जस्तो लाग्छ भने, तुरून्त प्रबन्धकसँग कुरा गर्न सोध्नुहोस्, तिनीहरूले स्टोर छाड्नु अघि उनीहरूले त्रुटि समाधान गर्न सक्नेछन।
यदि प्रबन्धकले यसलाई ठीक गर्न सक्षम छैन भने, तपाईंको रसीद राख्नुहोस् र तपाईंको WIC क्लिनिक कल गर्नुहोस्, वा दाबी फाइल गर्नको लागि टोल-फ्री ग्राहक सेवा लाइन (१-1-844२-892)) लाई कल गर्नुहोस्।
कार्ड र पिन
यदि मेरो कार्ड हराएको छ, चोरी भयो वा बिग्रियो भने के हुन्छ?
टोल-फ्री ग्राहक सेवा लाइनमा कल गरेर तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नुहोस् (1-844-892-3084).
यदि मैले किराना पसलमा गलत पिन प्रविष्ट गरेँ भने के हुन्छ?
तपाईंको सहि पिन प्रविष्ट गर्न तपाईंसँग चार अवसरहरू छन्। चौथो प्रयास पछि तपाईंको खाता लक हुनेछ।
यदि तपाइँ तपाइँको PIN सम्झन सक्नुहुन्न वा तपाइँको खाता लक गरिएको छ भने, टोल फ्री ग्राहक सेवा लाइन (1-844-892-3084) वा आफ्नो PIN परिवर्तन गर्न ebtEDGE पहुँच गर्नुहोस्।
तपाईंको खाता अर्को दिन १२:१० बिहान स्वचालित रूपमा अनलक हुनेछ।
तपाईको पिन चार अंकको नम्बर हो जसले तपाइँलाई किराने पसलमा तपाइँको Idaho WIC कार्ड प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँको पिन चयन नगरेसम्म तपाइँको कार्डले काम गर्ने छैन। चार नम्बरहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई सम्झन को लागी सजिलो छ, तर अरु कसैलाई अनुमान गर्न गाह्रो छ।
तपाईको पिन कसैलाई कहिले पनि नबताउनुहोस् र आफ्नो आईडाहो WIC कार्डमा पिन नलेख्नुहोस्। यदि कसैलाई तपाइँको पिन थाहा छ भने, तिनीहरूले तपाइँका सुविधाहरू प्राप्त गर्न तपाइँको कार्ड प्रयोग गर्न सक्दछन् र ती सुविधाहरू प्रतिस्थापन हुँदैनन्।